“Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officials” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၂
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်း၍ တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် တရားရေးအရာရှိများအတွက် ကျင့်ဝတ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲကို မြိတ်မြို့၊ မြင့်မိုရ်ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပရာ တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးတင်အောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး UNDP မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်း ရည် ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Read more about “Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officials” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၇
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်အောင်နှင့် ဦးအောင်ဇော်သိန်းတို့ပါဝင်သည့် အပြီးသတ်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီ အချိန်၌ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) တွင် ရုံးထိုင်ပြီး ရာဇဝတ်အထွေထွေလျှောက်ထားမှု (စာချွန်တော်) (၁) မှုနှင့် တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှု(စာချွန်တော်) (၅) မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တရားမအထွေထွေလျှာက်ထားမှု (စာချွန်တော်) (၆) မှုတို့ကို ရုံးထိုင်ကြားနာခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် JICA တို့ပူးပေါင်း၍ “How to Handle New Types of Evidence and Court-Led Mediation System” သက်သေခံပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်များကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာနှင့် တရားရုံးဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးစနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် JICA တို့ပူးပေါင်း၍ “How to Handle New Types of Evidence and Court-Led Mediation System” သက်သေခံပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်များကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာနှင့် တရားရုံးဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးစနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတကာညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအတွင်း " ကောင်းမွန်သော တရားစီရင်ရေးအပေါ် ယနေ့ ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို တုန့်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ " ( International Conference on " Judicial Excellence in Response to Today's Challenges " ) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတကာညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုဆွေးနွေးပွဲနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခြင်း ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IIDEA) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် “တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှု ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကို စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော် PARKROYAL ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Read more about တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုဆွေးနွေးပွဲနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခြင်း ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအတွင်း “ကောင်းမွန်သော တရားစီရင်ရေးအပေါ် ယနေ့ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို တုန့်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ” တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွါ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအတွင်း “ကောင်းမွန်သော တရားစီရင်ရေးအပေါ် ယနေ့ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို တုန့်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ” (International Conference on “Judicial Excellence in Response to Today’s Challenges”) သို့ တက်ရောက်ရန် နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ထွက်ခွာသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအတွင်း “ကောင်းမွန်သော တရားစီရင်ရေးအပေါ် ယနေ့ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို တုန့်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ” တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွါ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၃
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ပါဝင်သော အထူးအယူခံခုံရုံးသည် ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ရုံးထိုင်၍ တရားမအထူးအယူခံမှု (၇) မှုကို စီရင်ချက် ချမှတ်သည်။ ထို့ပြင် တရားမအထူးအယူခံမှု (၁၇) မှုကို ကြားနာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် UNDP တို့ပူးပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Fair Trial Rights and Judicial Ethics မျှတသော တရားခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် UNDP တို့ပူးပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Fair Trial Rights and Judicial Ethics မျှတသော တရားခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး “ Asia-Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ညီလာခံတွင် ဆက်ဆံရေးအရာရှိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် တရားရေးအရာရှိ (၅၀) ဦးအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၂၇
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် ADB ၊ UNDP တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့နှင့် ၃၀ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည့် “ Asia-Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ညီလာခံတွင် ဆက်ဆံရေးအရာရှိများအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် တရားရေးအရာရှိ (၅၀) ဦးအား ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး “ Asia-Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ညီလာခံတွင် ဆက်ဆံရေးအရာရှိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် တရားရေးအရာရှိ (၅၀) ဦးအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA)တို့ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးဥပဒေဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်စာအုပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)တို့ ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးဥပဒေဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်စာအုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော် PARK ROYAL ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ရှေ့နေ့များအသင်းချုပ်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖလှယ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr.IKEUCHI Masatoshi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ရှေ့နေများအသင်းချုပ်၏ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဖလှယ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr.IKEUCHI Masatoshi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ် ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀